Kheyre:“Dalka waxa madaxweyne ka noqon kara qofkii reer KG soo doortaan | SMC
Home WARARKA MAANTA Kheyre:“Dalka waxa madaxweyne ka noqon kara qofkii reer KG soo doortaan
Kheyre:“Dalka waxa madaxweyne ka noqon kara qofkii reer KG soo doortaan
Xasan Kheyre oo aan wali si toos ah u shaacinin in uu yahay musharax u tagaan tartanka madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadana waxa uu ku jiraan olole xowli ku socda kaas oo uu doonayo in uu u tartamo tartanka loolanka Madaxweynayaha dalka Soomaaliya.
Xasan Kheyre oo maanta kulan la qaaday qaar ka mida odoyaasha dhaqanka reer Koonfur Galbeed ee ku sugan magalada Baydhabo ayuu hortooda ka sheegay in uu ku jiro damac siyaasadeed ee uu doonayo in uu dalka madaxweyne uga noqdo.
Xasan Kheyre oo ka hadlaya muhiimada reer Koonfur Galbeed ayaa ku yiri odoyaasha uu la kulmay, “magaalada Baydhabo waan u badnaan doonaa bilaha soo socda maxaa yeelay degaankaan waa meesha ugu sameeynta badan siyaasasada Soomaaliya”. Waxa uu intaas ku daray “Soomaaliya waxaa madaxweyne ka noqon kara kiliya qofkii reer Koonfur Galbeed ay doortaan, waadna ogtihiin dalka qofkii madaxweyne ka noqonaya waa qof helay codka reer Koonfur Galbeed”.
Hadalka ka soo yeeray maanta Xasan Kheyre ayaa daaha ka qaaday damaca iyo qorshaha uu doonayo in uu ugu tartamo jagada Madaxweyaha Soomaaliya.
Mid ka mida odoyaasha goob jooga ka ahaa shirka ayaa u sheegay wariyaha Southern Media in Xasan Kheyre maanta uu si cad ugu sheegay odoyaasha dhaqanka oo ee la kulmay kuwaas oo u badnaa odoyaasha soo mgacaabi doona xildhibanada Baarlamaanka in uu yahay Musharax.
“ma aqaan in Somaali ama reer Koonfur Galbeed in ay soo dooran doonto iyo inkale , laakiin ninkaas hadalkiisa waa cadaa maanta, waxa kaliya ee u haray waa in uu ku dhawaaqaa doorashada, Ayuu yiri malaaqaas.
Sidoo kale siyaasiyiin kale uu kula kulmay magalaada Baydhabo ayuu u sheegay in uu doonayo in uu xafiisk ka furto Baydhabo isaga oo bilaha soocda donayo in uu mashaariic ka fuliyo degaanka Koonfur Galbeed.
Waa markii ugu horeeysay oo uu Xasan Kheyre si toos ah u soo hadal qaado damaciisa ah ka qayb-qaadashada doorashada lagu wado in ay dalka ka dhacdo sanadka 2021.
Xasan Cali Kheyre ayaa safarkiisa uu ku tagay magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur ayan ku wehlin xildhibanada laga soo doorto deegaanadaas taas oo kuu muujinaysa dareenka ay ka qabaan Xasan Cali Kheyre shacabka ku dhaqan Koonfur Galbeed.
Previous articleSIRDOONKA SOOMAALIYA OO BILAABEY ADEEGSIGA TECHNOLOGY-YADA CASTIGA AH
Next articledagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo Marko ka dhacay